उच्च गुणवत्ता - हाइबर प्ले उपकरण (शंघाई) कं, लिमिटेड
इनडोर खेल मैदानको गुणस्तरमा के भिन्नता छ?
चीनमा सब भन्दा पेशेवर इनडोर खेल मैदान निर्माताको रूपमा, हामी इनडोर खेल मैदान डिजाइन गर्ने र निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौं जुन अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र गुणस्तर मापदण्डहरू पूरा गर्दछन्।
हाइबरले केवल सबै भन्दा राम्रो सामग्री प्रयोग गर्दछ र एक कडा उत्पादन प्रक्रिया अनुसरण गर्दछ सुरक्षित, टिकाऊ र राम्रो डिजाइन गरिएको इनडोर खेल मैदानहरू यसका ग्राहकहरूको लागि। हामी गुणस्तरीय उत्पादनहरू बनाउन र उत्पादन गर्न धेरै प्रतिबद्ध छौं किनभने हामीलाई थाहा छ कि यो हाम्रो ग्राहकहरूको इनडोर खेल मैदान व्यवसायको लागि कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसो भए किन इनडोर खेल मैदानको गुणवत्ता फरक पार्छ?
यो भन्दै बिना नै जान्छ कि कुनै पनि खेल मैदानमा विशेष गरी इनडोर खेल मैदानमा बच्चाहरूको सुरक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनुपर्दछ। विशेष रूपमा केहि देशहरूमा, ईन्डोर खेल मैदानहरू खोल्न सकिदैन जबसम्म उनीहरू कडा सुरक्षा जाँच पास गर्दैनन्। त्यसकारण, उच्च गुणस्तरका उपकरणहरू इनडोर खेल मैदानको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि पहिलो चरण हो।
लामो अवधिमा, उच्च-गुणवत्ता इनडोर खेल मैदान उपकरणहरू भए रखरखाव लागतलाई कम गर्नेछ र दीर्घकालीन नाफा सुनिश्चित गर्दछ। अर्कोतर्फ, कम-गुणवत्ता उपकरणहरूले लगातार मर्मतसम्भार गर्नु पर्छ, जसले फलस्वरूप लाभदायक व्यवसायलाई घाटामा परिणत गर्दछ। कम गुणस्तरका उत्पादनहरूले धेरै सुरक्षा समस्याहरू निम्त्याउँदछन् र ग्राहकहरूले खेल मैदानमा भरोसा गुमाउन सक्छन् र भ्रमण गर्न रोक्न सक्छन्।
यूरोपियन र उत्तर अमेरिकी सुरक्षा मापदण्डहरू
उत्पाद सुरक्षा र गुणस्तर सधैं हाइबरको प्राथमिकतामा रहन्छ। हाम्रो खेल उपकरण उच्चतम गुणस्तरको सामग्रीबाट बनेको छ, र हाम्रो खेल मैदानहरू सम्पूर्ण संरचनाको सुरक्षा सम्म भौतिक सुरक्षाबाट सब भन्दा कडा अन्तर्राष्ट्रिय मानक (ASTM) मा प्रमाणित छ।
यी मापदण्डहरूको पालना गरेर, हामी इनडोर खेल मैदानहरूमा चोटपटकको जोखिम कम गर्न सक्दछौं र उनीहरूले कुनै पनि राष्ट्रिय सुरक्षा जाँच, अनिवार्य वा स्वैच्छिक पारित गर्न सुनिश्चित गर्न सक्छन्। यो सुरक्षा मापदण्डहरु बुझ्न को लागी उद्योग मा वर्षौंको अनुभव लाग्छ र महत्वपूर्ण संसाधनहरु लगानी गर्न को लागी र डिजाइन र निर्माण प्रक्रिया मा वास्तव मा लागू गर्न र उचित एकीकृत गर्न को लागी।
इनडोर एरेनासको गुणस्तरमा के भिन्नता छ?
पहिलो नजरमा, विभिन्न निर्माताहरूबाट इनडोर खेल मैदानहरू समान देखिन्छन्, तर तिनीहरू टुक्राहरूको प्याचवर्क हुन्, जबकि सतह मुनिको इनडोर खेल मैदानहरूको गुणस्तर भिन्न सामग्री, विनिर्माण टेकनिक, विस्तारमा ध्यान र स्थापनाको कारण व्यापक रूपमा भिन्न हुन्छ। यहाँ गुणस्तर पार्कमा के हेर्ने भनेर केहि उदाहरणहरू छन्।
सफ्ट पार्ट्स सामग्री
सफ्ट प्ले उत्पादनहरू
हामी इस्पात ट्यूब भित्ता २.२mm वा २.mm मिमी प्रयोग गर्दछौं। यी विशिष्टताहरू बिक्री सम्झौतामा तोकिने छन् र ग्राहकले हाम्रो उत्पादन प्राप्त गरेपछि प्रमाणीकरण हुनेछन्।
हाम्रो इस्पात ट्यूब तातो-डुबकी जस्ती इस्पात ट्यूब हो। जस्ती बनाउँदा, सम्पूर्ण इस्पात ट्यूबलाई पग्लिएको जिंक जिंक बाथमा डुबाइन्छ। त्यसकारण, पाइपको भित्री र बाहिरी भाग बारम्बार सुरक्षित गरिन्छ र धेरै बर्ष सम्म पनि रस्ट हुनेछैन। यसको विपरीत, अन्य कम्पनीहरूले "इलेक्ट्रोप्लाटिंग" जस्ता कम महँगो प्रकृयाहरू प्रयोग गर्दछन्, जुन वास्तवमा इस्पात नभएको इस्पात हो र यो कम क्षय प्रतिरोधात्मक हुन्छ र अक्सर स्थापना साइटमा पुग्ने बित्तिकै यसले जंग लाग्छ।
हाम्रो स्वामित्व क्ल्याम्पहरू mm एमएमको भित्ता मोटाईको साथ तातो-डुबकी जटिल माललेबल इस्पातबाट बनेको छ, जुन सस्तो क्ल्याम्पहरू भन्दा बलियो र अधिक टिकाउ हो।
यसको क्वालिटी परीक्षण गर्नको लागि ग्राहकले क्ल्याम्पमार्फत हथौड़ा गर्न सक्दछ। तपाईं सजिलैसँग कम गुणवत्ताको क्ल्याम्प्स बीचको भिन्नता भन्न सक्नुहुन्छ किनकि तिनीहरू भाँच्नेछन् र हाम्रो क्ल्याम्प्सले कुनै नोक्सान गर्दैन।
क्ल्याम्प्सको विविधताले हामीलाई अधिक भरपर्दो र जटिल देखिने भित्री इनडोर खेल मैदानहरू निर्माण गर्न र सक्षम गर्न सक्षम गरेको छ।
जमिनमा स्टील पाइपको लागि शक्तिशाली कास्ट फलामको लंगर समर्थन आवश्यक छ, बोल्टलाई क the्क्रीटको फ्लोरमा निश्चित गर्नुपर्दछ, ताकि स्टिल ट्यूब उचित स्थितिमा स्थिर रहोस्।
घरेलु पाइपमा अन्य आपूर्तिकर्ताहरू भुइँमा सजिलैसँग बस्न सक्दछन्, प्लास्टिकको सब्सट्रेटमा पनि स्थापना गर्न सकिन्छ, यो सस्तो र कम गुणस्तरको हाम्रो कास्ट फलामको लागि प्रतिस्थापन हो, सुरक्षा योजना छैन।
हाम्रो सुरक्षा नेट बाहिरी प्रयोगको लागि कडाईमा बुनेको शुद्ध प्रमाणित हो, जुन अन्य घरेलू आपूर्तिकर्ता ग्रिडहरू भन्दा बढी टिकाऊ हो।
हाम्रो वेभ स्लाइडको छेउमा, हामी एन्टी-क्लाइम्बि ne जालहरू सेटअप गर्नेछौं बच्चाहरूलाई स्लाइड माथिबाट बाहिर निस्कनबाट रोक्नको लागि।
सुरक्षा मापदण्डको ग्राहकहरुका लागि, हामी बच्चाहरुलाई संरचनामा चढ्न र जोखिममा नपर्न उच्च गुणवत्ताको एन्टी क्रोल नेटको साथ धेरै सानो जाल स्थापना गर्नेछौं।
हाम्रा सबै काठका भागहरू उच्च गुणस्तरको प्लाईवुडबाट बनेका छन्। धेरै अन्य घरेलु उत्पादकहरूको तुलनामा सस्ता लगहरू प्रयोग गर्नुहोस्, यो केवल कमजोर मात्र होइन, र सम्भावित कीट क्षतिको कारण लामो समयसम्म प्रयोग गर्न प्रतिकूल छ।
राज्यको वा देशको बिभिन्न आवश्यकताको साथ काठको प्रयोगका बिभिन्न ग्राहकहरू छन्, हामी उनीहरूको मागहरू पनि पूरा गर्न सक्दछौं र प्लाइवुडको स्थानीय स्तरको प्रमाणीकरण प्रयोग गर्न सक्दछौं।
हाम्रो पीवीसी लपेटो सबै चीन मा सर्वश्रेष्ठ निर्माताहरु द्वारा उत्पादित छन्। यी १ औंस औद्योगिक-ग्रेड उच्च शक्ति पीवीसी छालाको मोटाई ०.55 मिलिमिटर छ, भित्री कोटिंग १००० डी बुनेको नायलॉन सुदृढीकरणले यसलाई मुनि सक्षम बनाउँदछ, वर्षौंको गहिरो पोशाक नरम स्पर्श भएपछि।
हामी केवल सबै नरम उत्पादनहरूका लागि लाइनरको रूपमा उच्च घनत्व फोम प्रयोग गर्छौं, त्यसैले हाम्रो नरम उत्पादनहरू धेरै वर्षसम्म अपरिवर्तित रहन सक्दछन्। र हामी प्लाईवुडको सबै सम्पर्क सतहहरूलाई फोमले ढाक्नेछौं जब उनीहरू बच्चाहरू खेल्छन् उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न।
सफ्ट पाइपहरू र zip सम्बन्धहरू
नरम कोटिंगको फोम पाइप १.8585 सेन्टिमिटर र पाइप व्यास 8.cm सेमी हो।
पीवीसी खोलसँग एक शुद्ध र चहकिलो र ultra छ र अल्ट्राभायोलेट लाइटसँग प्रतिरोधात्मक पनि छ, यो सुनिश्चित गर्दै कि पाइप लचिलो र टिकाऊ रहन्छ पनि सूर्यको प्रकाशको सम्पर्कमा पर्दा।
अन्य घरेलु उद्यमहरूको फोम गरिएको प्लास्टिक सामान्यतया १.6 सेन्टीमिटर बाक्लो हुन्छ, र पाइप व्यास केवल c सेन्टीमिटर हुन्छ। पीवीसी शेल अल्ट्राभायोलेट लाइट प्रतिरोधी हुँदैन र र color फिडिंग गर्न सजिलो हुन्छ। PVC खोल आफै पनि समयको साथ कमजोर हुन्छ।
हामी इस्पात ट्यूबमा फोम ठीक गर्न धेरै बन्डलिंग प्रयोग गर्दछौं। हाम्रो छेउछाउ बन्डलिंग बीच दूरी सामान्यतया १cm सेमीबाट १ 16 सेमी हुन्छ, जबकि अन्य निर्माताहरूले सामान्यतया २cm सेन्टीमिटरदेखि cm० सेन्टीमिटरको दूरी छोड्दछन् सामग्री र स्थापना लागतहरू बचत गर्नका लागि। हाम्रो स्थापना विधि नरम वारेन्टी र ग्रिड बीच संरचना बनाउन अधिक कॉम्प्याक्ट र विश्वसनीय, ग्राहक मर्मत लागत घटाउने छ।
चढाई र्‍याम्प र सिढीहरू
हामीसँग उच्च घनत्व ईवा फोमको एक तह छ। स्पञ्जको यो लेयर रम्प र सीढीहरूलाई बच्चाहरूको जुम्पहरू प्रतिरोध गर्न र लामो समयको लागि तिनीहरूको मूल आकार कायम गर्न सक्षम गर्दछ।
भर्या .को दुबै पक्षहरूमा सिधा सुरक्षा नेट संलग्न गर्नुहोस् यो निश्चित गर्न कि दुई र बच्चा बीचमा कुनै अन्तर वा ठाउँ छैन।
भर्या .को तलको क्षेत्र पनि बच्चाहरूलाई बाहिर राख्नको लागि सुरक्षा नेटको साथ बारमा बाँडिनेछ, तर मर्मतका लागि स्टाफको प्रवेशका लागि प्रवेशद्वार तोकिनेछ।
हाम्रो बक्सि bags झोला स्पञ्जेजले भरिएको छ र हाम्रो उच्च शक्ति पीवीसी छालामा कडा लपेटेको छ तिनीहरूलाई लचिलोपन र मोटो र माथिल्लो दृश्य प्रदान गर्न।
र हामी यसलाई फ्रेममा जडान गर्न धेरै बलियो र टिकाऊ तार डोरी प्रयोग गर्दछौं। पंचि bag ब्याग यस विशेष तार डोरीको निर्धारण अन्तर्गत स्वतन्त्र रूपमा घुमाउन सक्छ।
इस्पात तार बाह्य एक प्याडेड पीवीसी छालाले कभर गरिएको छ, जसले बच्चाहरूको लागि सुरक्षित खेल सुनिश्चित गर्दछ, र सम्पूर्ण उपकरणको लागि एक उन्नत विवरण हो।
X बाधा झोला
हाम्रो X अवरोधको अन्त्य लोचयुक्त सामग्रीले बनेको छ क्लाइम्बि moreलाई अझ रमाइलो र चुनौतीपूर्ण बनाउनको लागि हो। धेरै कम्पनीहरूले अन्तमा लोचदार सामग्री प्रयोग गर्दैन, जसले अवरोधलाई अलि कडा र सुस्त बनाउँछ। हाम्रा सबै लोचदार वन अवरोधहरू सिंथेटिक कपासको उच्च घनत्वले भरिएका हुन्छन्, प्लेश प्याडिंगमा प्रयोग गरिएको प्याडिश जस्तो, जुन लामो समयसम्म मोटो रहन्छ। यसको विपरित, धेरै अन्य उत्पादकहरूले सामान्यतया उनीहरूका उत्पादनहरू बिभिन्न फोहोर उत्पादनहरूका साथ भर्छन्।
ईवा फ्लोर चटाई को मोटाई र गुणवत्ता पनि इनडोर बच्चाहरूको स्वर्गमा राम्रो भूमिका खेल्छ, राम्रो बनावटको अलावा राम्रो फ्लोर चटाई, अक्सर मोटाई र लगाउने प्रतिरोध राम्रो हुन्छ, राम्रो फ्लोर मैटले तपाईंलाई अक्सर फ्लोर बदल्न आवश्यक पर्दैन। चटाई
इनडोर खेल मैदान निर्माणको लागि स्थापना प्रक्रिया एक महत्त्वपूर्ण अंश हो। स्थापनाको गुणवत्ताले इनडोर खेल मैदानको समाप्त परिणामलाई असर गर्नेछ। यही कारणले गर्दा एक इनडोर खेल मैदान केवल पूर्ण रूपमा मानिन्छ जब यो पूर्ण रूपमा स्थापित भएको छ र सुरक्षा जाँच भैरहेको छ। यदि खेल मैदान राम्रोसँग स्थापना गरिएको छैन भने, इनडोर खेल मैदानको सुरक्षा र गुणस्तर उपकरणको गुणस्तरको परवाह नगरि ठूलो प्रभाव पार्नेछ।
हाईबीसँग एक अनुभवी र कुशल पेशेवर स्थापना टोली छ। हाम्रो स्थापना टेक्निशियनहरूको औसत ground बर्षको खेल मैदान स्थापना अनुभव छ। उनीहरूले विश्वभर १०० भन्दा बढी इनडोर खेल मैदान स्थापना गरेका छन्, र कडा मापदण्डहरू पछ्याउँदछन् सुनिश्चित गर्नका लागि तिनीहरू सही रूपमा स्थापित छन्, सुरक्षित र टिकाउ मात्र होइन, तर पार्कलाई एक उच्च-गुणवत्ता उपस्थिति दिन्छ र मर्मत गर्न सजिलो हुन्छ। हाम्रो पेशेवर स्थापना टीम हाम्रो स्थापना गुणवत्ता आश्वासनको आधार हो। यसको विपरित, धेरै अन्य आपूर्तिकर्ताहरूको आफ्नै स्थापनाकर्ताहरू छैनन्, तर स्थापना को कार्यहरू अरूलाई सबकन्ट्र्याक्ट गर्नुहोस्, त्यसैले तिनीहरूको स्थापना कार्यको गुणस्तरमा कुनै नियन्त्रण छैन।